Shiinaha Carruurta Baaskiil Baaskiil Baaskiil Baaskiil Leh / 14 inch Baaskiil loogu talagalay carruurta soosaarayaasha iyo alaableyda | Beimudou
Carruurta Baaskiil Baaskiil leh Baaskiil Baaskiil leh
Ugu horreyntii, iyadoo loo eegayo da'da iyo dhererka canugga inuu iibsado cabbirka saxda ah ee baaskiilka, anigu kugula talin maayo carruurta aadka u yaryar inay raacaan, ma ahan mid amaan ah.Waxaan u maleynayaa inay fiican tahay in la bilaabo raacitaanka ku dhowaad da'da seddex sano. 14-inch wuxuu ku habboon yahay seddex sano jir, iyo 16-inji waa la fuuli karaa markuu jiro afar ama shan jir.
Midab Jaale, oranji, buluug, casaan ama sida wiilasha loo baahan yahay
Rim 12 ", 14", 16 ", 18", 20 "daawaha birta ama aluminium b
Qaabka Baaskiilka bir iyo rinjiyeyn, naxaas bir qaro weyn ka sameysan oo alxanka / alxanka argon-qaansada / alxanka CO2
Fargeetada Baaskiilka bir iyo rinjiyeyn, co2 alxanka alxanka / fargeeto ganaax
Handlebar & Jirridda CP, UCP ama ED, argon-arc alxanka Φ22X0.8-1.2mm
Taayir 12 ″ x1.75, 16 ″ x1.75, 20 × 1.75 ama 1.95 / 2.125 Taayirada hawada ama taayirka EVA
Da'da 3- 12sano jir
Sidee loo doortaa baaskiilka ugu fiican ee carruurta?
Jinsiga ilmaha, dogobka baaskiil ee wiilku wuu ka sareeyaa kan gabadha, gabadhu waa inay soo iibsataa dogob ka hooseeya, ka ammaan badan, ku habboon kor iyo hoosba.
Baaskiilada qaar waa fududahay qaarna waa culus yihiin. Caruurta khafiifka ah si fudud oo dhaqso badan ayey u raacaan fudeyd ama culus, laakiin cillad darrada ayaa ah inay u dhacaan markay dhacaan. tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah, iyo xasilloonida qallooca.
Taayiradu waa qayb muhiim ah oo baaskiil ah. Taayirada wanaagsan waxay leeyihiin dabacsanaan wanaagsan, waxay xirtaan iska caabin waxayna ka samaysan yihiin caag wanaagsan. Taayirada xun way fududahay in la jabiyo waana dhib badan tahay dayactirkooda.
Intaas waxaa sii dheer, markaad dooraneyso oo aad wax iibsaneyso, waxaad tixgelin kartaa waxoogaa ka weyn, sida canugga dhererkiisu yahay 90cm. Marka loo eego habka kor ku xusan, waxaad dooran kartaa 12 inji ama 14 inji, laakiin guud ahaan waxaan doorannaa 14 inji, si ay carruurtu u isticmaali karaan muddo dheer.
Kama-dambaysta, U dooro baaskiil hadba xaaladda dhabta ah ee ilmahaaga, oo aan aad u weyneyn ama aan aad u yareyn, taam ayaa ah tan ugu fiican.
Hore: tayo sare leh 26 inji baaskiil buur oo loogu talagalay ragga / baaskiilka buuraha OEM
Xiga: Dhammaan iibka carruurta ee raqiiska ah baaskiil 3 illaa 5 sano / 2019 iibinta kulul carruurta baaskiiladaha
Baaskiil Balance Caruurta
Baaskiil Isku Laabista Carruurta
Carbon High steeel fram kids baaskiil / 12 inch ilmaha ...
Baaskiil Balance Caruurta, Balance Baaskiil, Balance Baaskiil, Baaskiiladaha, Baaskiil Balance Balance, 20 Baaskiil Inch / Baaskiil,